Sheekh caan ah oo Muslimiinta Bariga Dhexe ugu baaqay inay soo ‘dhaweeyaan’ Masiixiyiinta | Biyoguurenews.com
Home Wararka Sheekh caan ah oo Muslimiinta Bariga Dhexe ugu baaqay inay soo ‘dhaweeyaan’...
Sheekh caan ah oo Muslimiinta Bariga Dhexe ugu baaqay inay soo ‘dhaweeyaan’ Masiixiyiinta
Madaxa goobta ugu sarreysa ee lagu barto diinta Islaamka ayaa waxa uu ugu baaqay Muslimiinta Bariga Dhexe inay soo “dhaweeyaan” Masiixiyiinta la nool.
“Farriinta aan idiin hayo ayaa ah: ‘Soo dhaweeya walaalihiinna Masiixiyiinta ah. Waa walaalihiin dalka idinla leh. Aad ayey inoogu dhaw yihiin. Kuwaasi ayaa ah waxa gaarka ah ee isku kaaya xiraya,” ayuu yiri.
Markaa kaddib ayaa waxa uu u weecday Masiixiyiinta Bariga Dhexe waxaannu yiri: “Waxaan jeclaan lahaa inaydaan adeegsan kalmadda ‘laga tirada badan yahay’.
Previous articleDaawo, Suldaan Maxamed Xirsi Qani, Shirkan garxajis Lacag Ugama Baahnin xamar, halkana Soomaaliwayn Looga hadli maayo ,Labo dawladood ayaynu kala nahay,
Next articleDawo afhayeenkii Xisbiga wadani oo xilkii laga Qaaday, Laguna Tuhmay in uu Dus Dus u sameeyay Xukuumada Somaliland